Lo mlingisi abasha kunzima kakhulu ukwenza ngendlela yabo stardom. Manje uhlala eMoscow futhi isebenza umlingisi kuthandwa Sergey Chekanov, okuyinto vele eyaziwa kahle kakhulu kule laseStavropol. He cishe namesake umlingisi odumile Sergeya Chekana, ababehlanganyela ngenkuthalo isinyathelo Eighties, bese wahlanganyela lizwakalise movie. Lokho Izwi lakhuluma Sergeya Chekana "Ukuhlunga Hat" encwadini edumile Harry Potter Saga. namesake wakhe abasha cishe kakhulu uyindoda ne ikhono elikhulu zokudala.
Wazalwa Sergey Chekanov e laseStavropol, lapho wathola ubungcweti ofundisa umlando. Kakade imfundo professional le nsizwa waqaphela ukuthi ukubizwa kwakhe - yesehlakalo. Yena iqhaza elibonakalayo ukuphila walesi sikhungo, wasebenza ithimba KVN wathola udumo eside phakathi abafundi.
Ngaphezu kwalokho, uSergei Chekanov wasebenza umfundi yaseshashalazini, "The Edge", lapho aba lomqondisi futhi kwaba okuhlangenwe nakho okuhle eliyigugu nabanye abadlali. Manje lokhu nakho kwamsiza ukuhlela ezihlukahlukene izenzakalo. Sergey Phakathi ukuqeqeshwa, kwadingeka ukuba sebenzisana ngisho nenhlangano enkulu "laseStavropol Gazprom", ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi lapho esehlela umkhosi "Student Night".
Umsebenzi esikoleni Sergey Chekanov wafuna. Ngakho okokuqala ngemva kokuthweswa iziqu, yena waba waziphatha inhlangano amaqembu zezingane futhi ngacula njengenhlangano nokuveza. Omunye izinhlamvu yakhe ayeyithanda kwakungu Jack Sparrow. Kamuva, waqala ukuhlela amaholide kubantu abasha kuleli "iyisikhungo sokuthuthukisa ubuntu."
Kamuva ayesebenza khona club Karaoke isikhungo ukuzijabulisa. indawo Kugcine umsebenzi udumo lwakhe cishe wonke umuzi no-Sergey waqaphela ukuthi ukuthuthukisa idinga ukuya eMoscow. Ngaleso sikhathi, wenza eziningi amaholidi zimo amaklayenti ezizimele abasemazingeni ahlukahlukene.
Akwaziwa cishe namesake
E-Moscow Chekanova kwadingeka afunde ukuthi azi namesake sesizogcwala. Lokhu kwabangela ukumangala elincane ejensi nabalingisi ', njengoba Sergey isheke (umlingisi) eshona ngo-2005. Akwaziwa umlingisi wabulala umlutha wotshwala. Kuze 1993, wawumatasa kumafilimu ahlukahlukene.
Kamuva Gavel wahlanganyela dubbing Hollywood amabhayisikobho, imidlalo ewuchungechunge ye-TV namafilimu opopayi. izwi lakhe kule sizini lokuqala Brandon wathi "Beverly Hills, 90210" bese waba izwi Steve. Omunye amafilimu lokuqala, eyakhipha isheke kwaba "Amaphoyisa Academy", lapho ibandla waphathiswa kuphela kungathi izwi isihlubuki main Mahoney. Ngenhla omunye bands zokugcina elika Harry Potter Sergey Chekan wasebenza nendodakazi yakhe Pauline, manje ubani sisuswa ngenkuthalo.
Umnikelo-Bob Marley sika ekuthuthukiseni reggae!
Pop - umculo kuwo wonke umuntu
Izimali zomuntu: Indlela imali Webmoney?
Kuyini isakhiwo iso womuntu?
Futhi niyazi ukuthi izwi livela egameni "ruble"?
Umqulu osheshayo wemizuzu emihlanu: zokupheka
Eye Gel "Solkoseril": yokusetshenziswa, ukubunjwa, ukusebenza, kanye nokubuyekeza
I-Ramada Resort Lara 5 (Turkey): incazelo, izithombe nokubuyekezwa kwezivakashi, amazinga
Sodium thiosulfate. Ukuhlanzwa umzimba ukulungela